Koonfur Afrika oo hanti ganacsato Somali looga gubay. - Wargeyska Faafiye
Cape town—Meherado ganacsi oo ay la haayeen ganacsato Somali ah ayaa lagu gubay qaa kana lagu boobay Magaalooyin ka tirsan Dalka South Africa xilli la isku diyaarinayo doorashada Dowladaha hoose ee Dalkaasi.
Xilli todobaad kaliya ay ka harsan tahay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalka South Africa ayaa magaalooyinka iyo gobolada kala duwan ee Dalkaasi, ayaa laamaha amniga laga diiwaan galiyay falal isugu jiraan dilal,dhac ,iyo waliba rabshado lagu boobayo goobaha ganacsiga.
Falkii ugu dambeeyay ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafada Mbkweni oo qiyaastii 70 km u jirta magaalada Cape Town, kadib markii shacabka xaafadaasi loo diiday dhul ay guryo ka dhistaan, waxaana taa badalkeeda ay dhigeen banaanbaxyo arrintaasi ay uga soo horjeedaan taana ay sababtay in kooxo burcad ah ay ka faa’iideystaan oo ay boobeen goobaha ganacsi oo ay lahaayeen Dadka ajaanibta ah oo ay ku jiraan dukaamo ay ku ganacsadaan Soomaalida.
Cabdiraxmaan Faarax Xundubeey oo ka mid ah ganacsatada hantidooda la boobay ayaa u sheegay Warbaahinta Qaranka in goobtooda ganacsiga ay ka qaateen kaliya sharciyadii ay dalka ku joogeen isla markaana ay soo badbaadisay haweeney daris laheyd oo gurigeeda ku xareysay inta kooxaha burcada ah ay raadinayeen.
Guddoomiyaha Jaaliyadda somalida ee Magaalada Cape town Muuse Afrax ayaa sheegay in inkastoo Dalka South Africa oo dhan ay ka dhacayaan rabshadaha hadana xilliyada doorashooyinka waxaa sii kordha falal dambiyeeyda la xariira arimaha doorashooyinka.
Laamaha amaanka ayaa ku jira dadaalo lagu xakameeynayo falalka ammaan darada ah ee kooxaha qaswadayaal ahi ay geysanayaan waxaaana police-ka Dalkaasi ay sheegeen in fal dacwadeedyo kala duwan laga diiwaan galiyay saldhiga police-da, waxaana loo xil saaray guddiyo ka kala socda lamaaha ammaanka in ay baritaano ku sameeyaan dhacdooyinkaasi marka ay soo kala cadaadaan Maxkamad la soo taagi doono.
Filed in: .Warka, Editorial Tags: ganacsato somali
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsXildhibaanada oo hadalkii M/weynaha soo dhaweeyayIs-Casil: Akhri 14 Qodob Oo Baarlamanku Eeddeeyey Madaxweyne Xasan Sheikh.Police: 2 suspects confessed in Tulsa shootingsFiqi oo fashilay Arimo Badan oo ku saabsan waxaa amaanka loo sugi la yahay iyo cida ka dambeeysa .Connecticut school shooting: 26 killed, gunman dead